NgoLwesithathu, Juni 6, 2012 NgoMvulo, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Indawo ilayishwa kancinci. Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amaxesha endiwufumene lo myalezo kule minyaka idlulileyo xa ndisebenza nabaxhasi. Isantya sendawo sibaluleke ngokungaqhelekanga… sinokunciphisa ii-bounces, ukugcina iindwendwe zibandakanyekile, ukufumana indawo yakho ibekwe bhetele kuGoogle, kwaye ekugqibeleni kukhokelele kuguquko oluninzi. Siyazithanda iisayithi ezikhawulezayo… yenye yezinto zokuqala esihlasela ngazo nomthengi (kwaye nokuba kutheni sisamkela WordPress kwiFlywheel -Ilikhonkco elinxulumene nayo).
Ukufumana inqaku lokuba indawo iyacotha iyacaphukisa kuba isekelwe kumakhulu emicimbi… ingakanani ibhendi yenkampani yakho, bangaphi abantu abayisebenzisayo, ukhuphelo lwasemva olwenzileyo, isikhangeli osisebenzisayo, izongezo zebrawuza ziyasebenza, Nokuba yindawo ekhuselekileyo, apho kusingathwa khona imimandla yakho, apho indawo ibanjelwa khona, zingaphi ezinye iisayithi ezilayishwe kumamkeli omnye, ukuba iseva yakho iyigcina njani indawo kwaye ukuba uhambisa izibonelelo ezimileyo ngokusebenzisa CDN ukubiza ezimbalwa.
Akunakwenzeka ukuba uxelele ukuba ingaba yintoni ingxaki xa abathengi bethu befikelela kuthi kwaye babuze. Ke, ngokubanzi sityelela iisayithi ezinje Pingdom kwaye usebenzise izixhobo zesantya kwaye ubonakalise kubo ukuba wonke umntu ngaphandle kwabo akanangxaki. Ewe, kulapho bathi babuye khona basixelele ukuba wonke umntu abamaziyo unengxaki, naye… uyancwina.
Kwaye ukuhlalutya isantya sephepha lakho kwiGoogle Search Console (icandelo leelebhu) yinto ehlekisayo… ixhomekeke kubantu abaqhuba ibar yesixhobo ukuxela isantya. Akukho ndawo zininzi kakhulu apho unokufumana impendulo eyiyo. Okanye ikhona? Ukuqonda iTorbit sisixhobo somlinganiso wokwenyani esongeza ukungafihli kwiwebhusayithi yakho ayinakho ukunika impendulo, kodwa kunye nezisombululo. Ikuvumela ukuba utyumbe kunye nedayisi kuzo zombini iindwendwe zakho kunye nendawo yakho ukuze ubone owona mfanekiso wesantya sendawo yakho.
Ukuqonda iTorbit yenza imilinganiselo yokulinganisa yomsebenzisi yokwenyani, ivumela umthengisi ukuba abeke esweni amaxesha okwenyani okulayisha iphepha lewebhu kutyelelo ngalunye. Esi sixhobo siqhuba ulwazi phantsi kwepin-point apho iphepha lewebhu lihamba kancinci, kwaye ngoba. Isisombululo sesibini senza ukuba idatha ifumaneke ngexesha langempela.
Esi sixhobo sibonelela ngematriki ezinomdla ezinjengokunxibelelana phakathi kwesantya sokulayisha iwebhusayithi kunye namaxabiso okubuyisa okanye amaxabiso okuguqula, ixesha lokwenyani lokunika ingxelo kwimephu yokujonga bukhoma, i-histogram yamaxesha omthwalo womsebenzisi ngeemetriki ezinje ngeepedian kunye neepesenti eziphezulu, ukuthelekisa intsebenzo ngokwahlukeneyo iibrawuza kunye nejografi, kunye neengcebiso ezenziwe malunga nendlela yokusebenza okungcono, zonke zinesampulu yeepesenti ezili-100. Kwaye ukuba usebenzisa indawo yeWordPress, unokuvuka kwaye usebenze ngokukhawuleza nge Iplagi yabo yeWordPress.
Ngolu lwazi, ngoku ungachonga ukuba ngaba ukuhanjiswa kweekhowudi kwakutshanje kwenza ukuba iwebhusayithi yakho icothe kakhulu, nokuba ingcambu yeso sixhobo ngumthwalo onzima, okanye… bonisa nje umxhasi wakho ukuba wenza umsebenzi wakho kwaye indawo isebenza kakuhle.
Kuyamangalisa ukugcina amaxesha omthwalo ngokwendawo, ngokunjalo!
Ixabiso lilungile ngokunjalo. Inguqulelo esisiseko ye Ukuqonda iTorbit, kubandakanya isampulu yeepesenti ezili-100 ukuya kuthi ga kwi-1,000,000 yeembono zenyanga kunye nokugcinwa kwedatha kweentsuku ezingama-30, iza simahla. Ukuba ungathanda ukwehlela kwimicimbi, jonga olona tyelelo lwakho lubalaseleyo nolona lubi, okanye ujonge ukuguqulwa ngexesha lokulayisha, isixhobo sifuna uhlaziyo.
tags: iimpukaneI-google webmastersamaphephaisantya esweniukubeka esweni ngokukhawulezaukusombulula ingxaki ngokukhawulezaityhunaUkuqonda torbitwpengine
Vula Ivenkile yeFacebook kwimizuzu eli-15 ngeNtlawulo
Juni 6, 2012 ngo-7: 54 PM
Enkosi ngolu lwazi Doug, ngokuqinisekileyo le yinkonzo epholileyo kakhulu ithathela ingqalelo ixabiso lentengo.
Juni 6, 2012 ngo-8: 20 PM
Ubheja @ twitter-353825851: disqus! Nam bendicinga njalo !!!
Juni 7, 2012 ngo-9: 34 AM
Awunakukujongela phantsi ukubaluleka kwexesha lokulayisha kwiwebhusayithi yakho. Nokuba umxholo kunye noyilo lwakho lukhulu, ukuba ilayisha kancinci uza kuphulukana neendwendwe. Iinjini zokukhangela zithanda iwebhusayithi ebonelela ngamava omsebenzisi.
Juni 9, 2012 ngo-2: 34 AM
Doug, Kulungile ukuva ukuba usebenzisa iTorbit Insight kwaye uyifumana iluncedo. Enkosi ngenqaku!